ကိုဩဒိနိတ်: 16°N 108°E﻿ / ﻿16°N 108°E﻿ / 16; 108
Việt Nam (ဗီယက်နမ်)
ဆောင်ပုဒ်: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
"လွတ်လပ်ရေး - လွတ်မြောက်ရေး - သုခ"
နိုင်ငံတော် သီချင်း: Tiến Quân Ca
(အင်္ဂလိပ်: "Army March")
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (အစိမ်း)
၇၃..၇% ဘာသာမဲ့ / ရိုးရာ
ပြည်ထောင်စု မက်စ်-လီနင်ဝါဒ တပါတီ ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံစနစ်
• ပထမ ဧကရာဇ်မင်းဆက်
• ပြင်သစ်ထံမှ လွတ်လပ်ရေးကြေညာခြင်း
၁၉၄၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်
• ဂျီနီဗာ သဘောတူညီချက်
၁၉၅၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်
• ဆိုင်ဂုံမြို့ ကျဆုံးခြင်း
၁၉၇၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ ရက်
၁၉၇၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂ ရက်
၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်[n ၂]
၃၃၁,၆၉၉ km2 (၁၂၈,၀၇၀ sq mi) (အဆင့်: ၆၆)
၉၆,၂၀၈,၉၈၄ (အဆင့် - ၁၅)
၂၉၅.၀/km2 (၇၆၄.၀/sq mi) (အဆင့် - ၂၉)
$၁,၀၄၇.၃၁၈ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၂၃)
$၁၀,၇၅၅ (အဆင့် - ၁၀၆)
$၃၄၀.၆၀၂ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၃၅)
$၃,၄၉၈ (အဆင့် - ၁၁၅)
မြင့် · ၁၁၇
ဒေါင် (₫) (VND)
ဗီယက်နမ် စံ‌တော်ချိန် (UTC+07:00)
သမိုင်းမတင်မီခေတ် နှင့် ရှေးခေတ်သမိုင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၈၆၂-၁၉၄၅ ပြင်သစ် အင်ဒိုချိုင်းနား[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၄၆-၅၄ ပထမ အင်ဒိုချိုင်းနား စစ်ပွဲ[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၇၆ မှ ယခု ပြန်လည် ပေါင်းစည်းခြင်း နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး[ပြင်ဆင်ရန်]
ဂေဟစနစ် နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဗီယက်နမ်ရှိ အကြီးဆုံး မြို့တော် နှင့် မြို့ကြီးများ
ဟနွိုင်းမြို့ ၁ ဟိုချီမင်းစီးတီး ဗီယက်နမ်၏ စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်များ ၈,၂၄၄,၄၀၀
၂ ဟနွိုင်းမြို့ ဗီယက်နမ်၏ စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်များ ၇,၃၇၉,၃၀၀
၃ ဟိုင်ဖုန်းမြို့ ဗီယက်နမ်၏ စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်များ ၁,၉၄၆,၀၀၀
၄ ကန်သိုမြို့ ဗီယက်နမ်၏ စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်များ ၁,၂၃၈,၃၀၀
၅ ဘျန်ဟွာမြို့ ဒုံနိုင်း ၁,၁၀၄,၄၉၅
၆ ဒါနန်မြို့ ဗီယက်နမ်၏ စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်များ ၁,၀၀၇,၇၀၀
၇ နာ့ထရန်မြို့ ခန်းဟွာ ၃၉၃,၂၁၈
၈ ဘွန်းမားသောက်မြို့ ဒတ်လတ် ၃၅၀,၀၀၀
၉ ဟူးမြို့ သွာသရန်းဝှေ ၃၃၇,၅၅၄
၁၀ ဗင်းမြို့ ငဲ့အန်း ၃၃၀,၀၀၀
↑ The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam states that Vietnamese language is the "national language", rather than the "official language"; Vietnamese is the only language used in official documents and legal proceedings de facto.
↑ The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam။ Vietnam News Agency (15 January 2014)။ 1 May 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ General Statistics Office of Vietnam 2019.
↑ 2019 Report on International Religious Freedom: Vietnam။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ International Monetary Fund.
↑ Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF)။ hdr.undp.org။ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်။ 15 December 2020။ pp. 343–346။ ISBN 978-9-211-26442-5။ 15 December 2020 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး (PDF) ။ 15 December 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၇.၀ ၁၇.၁ Cuong, 1986.
↑ Country's Official Name။ Easy Riders Vietnam။9November 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၄.၀ ၃၄.၁ Hirschman, Charles (1995). "Vietnamese Casualties During the American War: A New Estimate". Population and Development Review 21 (4): 783–812. doi:10.2307/2137774. Archived 20 June 2010 at the Wayback Machine.
↑ ၆၉.၀ ၆၉.၁ Stowe, Judy (28 April 1998). "Obituary: Nguyen Van Linh". The Independent (London). p. 20.
↑ ၇၀.၀ ၇၀.၁ Ackland, Len (20 March 1988). "Long after U.S. war, Vietnam is stillamess". St. Petersburg Times (Florida). Page 2-D.
↑ ၇၂.၀ ၇၂.၁ Hoang Thi Bich Loan။ "Consistently pursuing the socialist orientation in developing the market economy in Vietnam"၊ Communist Review၊ TạpchíCộngsản.org.vn၊ 18 April 2007။ Archived from the original on 10 May 2011။
↑ ၈၂.၀ ၈၂.၁ Vietnam Foreign Policy။ Ministry of Foreign Affairs။ 25 February 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၇.၀ ၈၇.၁ "Vietnam – Geography". Index Mundi. 12 July 2011. Retrieved 19 December 2011.
↑ ၈၉.၀ ၈၉.၁ ၈၉.၂ ၈၉.၃ ၈၉.၄ ၈၉.၅ Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia 2005 (in Vietnamese)။ 23 February 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၉၂.၀ ၉၂.၁ ၉၂.၂ World Economic Outlook: Vietnam။ International Monetary Fund (October 2013)။ 14 February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Economy of Vietnam Archived 24 December 2018 at the Wayback Machine.. CIA World Factbook. Updated 21 September 2012. Retrieved4October 2012.
↑ ၁၀၁.၀ ၁၀၁.၁ Vandemoortele, Milo (2010)။ Viet Nam's Progress on Economic Growth and Poverty Reduction: Impressive improvements။ Overseas Development Institute။ 14 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၂၅.၀ ၁၂၅.၁ Ngan Nguyen (December 2012)။ How English Has Displaced Russian and Other Foreign Languages in Vietnam Since "Doi Moi" (PDF)။ International Journal of Humanities and Social Science။ 18 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ CIA World Factbook- Vietnam။ Central Intelligence Agency။ 24 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၄၀.၀ ၁၄၀.၁ Pocket World in Figures။ The Economist။ 2009။ ISBN 978-1-84668-123-3။
↑ Tackling child malnutrition in rural Vietnam။ Plan Vietnam (2008)။ 11 January 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၄၃.၀ ၁၄၃.၁ ၁၄၃.၂ ၁၄၃.၃ Vietnam country profile (PDF). Library of Congress Federal Research Division. December 2005. Retrieved9July 2013. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
↑ Folk poetry preservationalabour of love။ VietNam News (29 June 2010)။ 21 April 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 February 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Portal of the Government of Vietnam Archived 28 May 2012 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ&oldid=743656" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ မေ ၂၀၂၂၊ ၂၂:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။